WARBIXIN: Kaddib Markii Ay Xaqiijisteen Booska Koowaad Ee Group B, Kooxahee Ayay Barcelona Ku Aadi Kartaa Wareega 16-ka Kooxood Ee Champions League? - Gool24.Net
WARBIXIN: Kaddib Markii Ay Xaqiijisteen Booska Koowaad Ee Group B, Kooxahee Ayay Barcelona Ku Aadi Kartaa Wareega 16-ka Kooxood Ee Champions League?
Kooxda Barcelona ayaa xalay xaqiijisatay inay booska koowaad kaga baxday Group-keeda B waxaana ay lix dhibcood oo saafi ah ka sarre martay kooxaha Group-ka la waadagayay ee Inter Milan iyo Tottenham Hotspurs oo iyagu toddobaadka lixaad kala xaqiijisan doona booska labaad.
Guusha ay Blaugrana kasoo heshay kooxda ree Holland ee PSV ayaa xaqiijinaysa inay wareega xiga ee 16-ka kooxood la ciyaari doonto koox kusoo baxday kaalinta labaad isla markaana aysan Spain kasoo wada jeedin.
Aan ku bilawnee Group A ayay kasoo baxeen kooxaha Atletico iyo Dortmund balse kulanka dambe ayaa la ogaan doonaa kooxda xaqiijisata booska koowaad iyo kooxda booska labaad. Atletico ayaan Barca ku aadi karin sababtoo ah sharciga dhigaya in laba kooxood oo isku wadan ahi aysan isku arki karin wareegan.
Group C ayaa ah mid isku aad adag siin kara kooxda Ernesto Valverde maadaama oo aan ilaa haatan lagu kala bixin isla markaana ay hirsad adag ku jiraan kooxaha Napoli, Paris Saint-Germain iyo Liverpool, Kooxda booska labaad gasha ayayna macquul tahay inay ku beegmaan kooxda ree Catalonia.
Group D ayaa lagu kala baxay, Kooxda ree Germany ee Schalke ayaa booska labaad ku jirta isla markaana kamid ah kooxaha ku aadi kara Barca.
Group E ayaa sidoo kale aan wali lagu kala calaf qaadin, Kooxaha Ajax iyo Bayern Munich ayay kala cadaan doontaa kooxda labaad gasha marka ay is arkaan labadan kooxood kulanka ugu dambeeya heerka Group-yada.
Group F ayay kasoo baxday Manchester City walow aysan xaqiijisan booska koowaad, Waxa soo raaci doona midkood kooxaha Lyon iyo Shakhtar oo kala baxaya.
Group G ayay sida aan horeba usoo xusnay kasoo baxday Roma inkastoo ay booska koowaad gashay Real Madrid, Dhinaca kale Group H ayay xaqiijisteen boosaskooda kooxaha Juventus iyo Manchester United walow aysan qudhoodu wali ku kala bixin booska koowaad.
saxiibyal meesha ay ay ku qorantahay sii akhri wararka kale ee maanta hagaajiya.
markaad ku dhufato bage kii hore ayuun baa soo noqonayee